Fixing Tethering Issues – Xiaomi Guide
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ WiFi Hotspot ဖွင့်တယ်။ ရတယ်။ အခြားဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာကနေ WiFi ကိုချိတ်တယ်။ ရတယ်။ အင်တာနက်တော့မထွက်ဘူး။ Mobile Data pack တွေလဲ အစုံရှိတယ်.. စသည်ဖြင့် ဖြစ်တတ်တာလေးမျိုးတွေအတွက် Fix ပေးဖို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။
ဒါမျိုးတွေကို Tethering လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကိုယ့် Mobile Data ကို HotSpot ပြန်လွှင့်ပေးပြီးသုံးတာ WiFi Tethering…. ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးတာ USB Tethering… Bluetooth မှတစ်ဆင့်ပြန်လွှင့်ပေး အခြားက Blutooth မှတစ်ဆင့်ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်သုံးတာ Bluetooth Tethering ပေါ့ ခင်ဗျာ….။
အဓိက ဖြစ်တာကို စမြင်ရတာက Redmi Note5တွေ စထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပါ။ ဖုန်းတိုင်းရယ်လဲ မဖြစ်ပါဘူး..။ ကျနော်တို့လို Model နိမ့်နိမ့်ပဲ ကိုင်ဖူး သုံးဖူးသူတွေမှာ ဒါမျိုးတွေ မကြုံဖူးပါဘူး။ အဆင်ပြေပြေပါပဲ…။ 😀 😀 အခြားသော ဖုန်းများမှာလဲ အချို့တွေ ဖြစ်ကြတာကို တွေ့မိပါတယ်။ ဥပမာ Mi Mix2, Mi 6x စတာလေးတွေမှာပါ။ MIUI Update ပေးရင်းနဲ့အဆင်ပြေပါပြီ။ အချို့တွေလဲ Update ပြီးအဆင်ပြေတယ်။ အချို့လဲ Update ပြီး Factory Reset ချပြိးမှ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ Update ကလဲ ပေါ်မလာဘူး။ လုပ်မရဘူး။ Factory Reset ချရင် Data တွေ ပျက်မှာ.. စသည်ဖြင့် ဖြစ်နေသူတွေ လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ ဘာ BLU, Root တွေမှလဲ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာလေးတော့ လိုတာပေါ့လေ.. နော့.. 😀 😛 အခုမှ အဲသည်ဖုန်း model တွေ ဝယ်မယ်ဆို ကြုံချင်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော Hot Spot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တစ်ခုထဲမှာ ဒါလေးလဲရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့ idea လေးလဲ ရထားစေဖို့ပါ။ ဥပမာ Zapya သုံးတယ်။ မြင်တော့မြင်တယ်.. ။ ချိတ်လို့ရတယ်။ Data Transfer ကလုပ်မရဘူးဆိုရင် Zapya ကလည်း HotSpot ကတစ်ဆင့်လုပ်တာဆိုတော့ ဒါများဖြစ်နေမလား စသည်ဖြင့် တွေးကြည့်လို့ရတာပေါ့။ ကိုယ့်ဆီကဟာကိုလွှင့်.. အခြားမှာပြန်ချိတ်လုပ်ဆိုတာမျိုးက User တွေ လုပ်တာနဲတယ်လေ။ Mobile Data နဲ့ အင်တာနက်သုံးမယ်.. WiFi ရှိရင် အဲဒါချိတ်သုံးမယ်.. စတာတွေပဲ လုပ်တာများတယ်လေ။ သည်တော့ Hot Spot ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Zapya ကိုသုံးတယ်ဆိုတာက အရင်ဆုံး ကြုံတွေ့နိုင်ချေပိုရှိတာပေါ့။ Zapya နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသော Tips လေးတွေကိုလဲ သည် Blog ထဲမှာ ရှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ရေးထားတာနှစ်ခုလောက်တော့ ရှိပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက Custom rom တွေ တင်သုံးရင်လဲ ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဗျ.. ။ ကိုယ်ကတော့ rom တင်တယ်။ Mobile data ဖွင့်တယ်။ သုံးတယ်။ အိုကေတယ်။ WiFi ရှိတယ်။ ချိတ်တယ်။ သုံးတယ်။ အိုကေတယ်။ ကိုယ့်ဆီက Hot Spot လွှင့်မှ ခုလို ဖြစ်လာပြန်ရော…။ ဒါဆိုလည်း သည်နည်းလေးနဲ့ Fix ပေးကြည့်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
လိုအပ်တာတွေကတော့ ကွန်ပျူတာလိုမယ်။ ဖုန်းနဲ့ချိတ်လုပ်ဖို့ Adb, Fastboot usb drivers တွေလောက်တော့ တင်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမှာပေါ့။ Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် အလွယ်ဆုံး အဆင်ပြေဆုံး USB Driver တင်နည်းကို သည် Blog ထဲက Boot Loader Unlock post မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားလို့ အဲသည်အတိုင်းလုပ်ရင် အဆင်မပြေစရာ မရှိပါဘူး..။
ADB ကနေ command ရိုက်ပြီး စစ်ကြည့်မယ်။ Issue ဖြစ်နေရင် command ပေးပြီး ပြင်မယ်။ စတာတွေလုပ်မှာဆိုတော့ ဖုန်းကတော့ ကောင်းနေ firmware တက်နေရမယ်ဗျာ.. 😀 ပြီးတော့ Settings -> Additional Settings -> Developer Options ထဲမှာ အောက်ကပုံလေးတွေလို ON ထားပေးရမယ်။ Developer Option ပေါ်ဘူးဗျ ဆိုရင်လဲ Settings -> About Phone ထဲမှာ MIUI Version နေရာကို ခြောက်ချက် Tap လုပ်ပေးပါ။ You are nowadeveloper ဆိုတဲ့ toast noti စာသားလေးပေါ်လာရင် အဲဒါပေါ်ပါပြီ။
အောက်ပါလေးခုကို ON ထားပေးပါ။ Install Via USB ဆိုတာ ON ဖို့ Internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ ကျန်တာလေးတွေ ON ချိန်မှာလဲ Warning box လေးတက်လာပါမယ်။ Count down timer လေးပြီးအောင်စောင့်ပြီး Next, Accept တွေလုပ်ပေးပါ။ ဒါလေးတွေကလည်း လူကြီးမင်းတို့ Security App ကိုသုံးပြီး Auto Clean တွေ Fix တွေ လုပ်ရင် ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။ အရင်က ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ပြီး adb command လုပ်တာ အကုန်ရတယ်.. ခုမရတော့ပြန်ဘူးဆိုရင်…. ဒါလည်း MIUI ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ idea တစ်ခုပါပဲ။
ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်။ ကွန်ပျူတာမှာ Command Prompt ကိုခေါ် ( WinKEY + R -> cmd or Shift + Right Click -> Open Command Windows Here.. မိမိနှစ်သက်ရာပေါ့ ) adb devices ဆိုတဲ့ command လေးရိုက်ပေးပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ တစ်ခါမှမချိတ်ဖူးသေးတဲ့ အသစ်ဆိုရင် ခုလိုလေး Permission တောင်းတာပေါ်လာပါမယ်။ ခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့။ adb devices လို့စစ်ပြီး device တစ်ခုပြရင် adb အလုပ်တွေ စနိုင်ပါပြီ။ unauthorized လို့ပေါ်နေတာက ဖုန်းမှာပေါ်လာတဲ့ Permission လေးကို ခွင့်ပြုမပေးသေးလို့ပါ။
Device သိသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ shell prompt ထဲကို adb shell လို့ရိုက်ဝင်မယ်ခင်ဗျာ။ ဒါဆို ဖုန်း setting နဲ့ပြီး adb commands တွေသုံးလို့ အချို့အရာတွေ လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ( Rooted ဖုန်း မဟုတ်ရင်တော့ system ပိုင်း ပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေတော့ ဘယ်သုံးနိုင်ပါမလဲ ) Tethering နဲ့ပတ်သက်လို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ဖို့ value ရှိနေမလားဆိုတာ စစ်ပါတယ်။ settings get global tether_dun_required ဆိုတဲ့ adb command နဲ့ပါ။ 1 ဖြစ်နေရင် Tethering ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်လှပါ။ ကျနော့် ဖုန်းမှာတော့ null လို့ပြပါတယ်။ WiFi Tethering (HotSpot), USB Tethering, Bluetooth Tethering စတာတွေ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်တာတွေ ဖြစ်နေရင် ခုနစစ်တဲ့ setting value ကို0ထားပေးရပါတယ်။ သည် settings put global tether_dun_required0command နဲ့ပါ။ ထားပြီးရင် ကိုယ်ထားထားတာ ဝင်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်စစ်နိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာ စစ်တဲ့ command ကို သိပြီးသားပါနော်။ အောက်က ပုံလေးအတိုင်းပေါ့။
လိုချင်သလို ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံလေးထဲက command လေးနှစ်ခုရိုက်ပေးလိုက်ရင် ဖုန်းက Reboot လုပ်သွားပါမယ်။ ပြန်တက်လာရင် Tethering ပိုင်းတွေ အဆင်ပြေပြေ အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ……။
အခုဆိုရင် Tethering ( WiFi, USB, Bluetooth ) ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင် ဒါမျိုးလေးတွေ စစ်ကြည့် လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ Idea လေးတစ်ခုတော့ ရလောက်ပါပြီ။
MIUI Funs များ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ… 🙂